बालुवाटारमा कानून व्यवसायीले दिएका सुझावको अर्थ र संविधानमा पर्ने तीन असर
यस कारण गलत छ पीसीआर परीक्षणमा सरकारले लिएको शुल्क
चिकित्सा शिक्षाको परीक्षामा सहभागी नक्कली परीक्षार्थी सहित तीन पक्राउ
नेपालमा डेल्टा र ओमिक्रोन दुवै भेरियन्टको जोखिम
सत्ता गठबन्धनलाई स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न कानून व्यवसायीको सुझाव
क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्नेलाई कारबाही गर्ने राष्ट्र ब्यांकको चेतावनी
७७ हजार नाघे सक्रिय सङ्क्रमित
१७ हजार स्वाब परीक्षण गर्दा ६ हजारमा कोरोना
कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र चुनावको प्रावधान ‘ड्राफ्टिङ एरर’
टेकु अस्पतालका ५० स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना, खोप अभियान स्थगित
के हाँसोले स्वस्थ राख्छ?
हिमालखबर विशेष डा. अरुणा उप्रेती
दैनिक मन फुकाएर हाँस्दा दुःख, पीडा मात्रै बिर्सिंदैन, शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रहन सकिन्छ।
हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यसँग हाँसोको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। त्यसलाई बुझेर संसारभर हाँस्ने क्लबहरू खुलेका छन्। मानिससँग हाँस्दा सुन्दर देखिने प्राकृतिक गुण छ। हामी श्रृंगार गरेर हाँसोलाई आफूले चाहेजस्तो बनाउन सक्छौँ।
हिन्दू पितृसत्ताले थिचेको महिलाको हाँसो हिन्दू वर्णवादी समाजमा पितृसत्ताले महिलाको आर्थिक स्रोत, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र यौनिकतामा कब्जा जमाएको छ। उनीहरूको हाँसो नियन्त्रित छ। हाँसो नै खुशीको मापक हो भने, नेपाली महिलाको ओठमा कति समय हाँसो झल्कन्छ?
खुशीको स्रोतबारे के भन्छ बौद्ध दर्शन? बौद्ध धर्मको पञ्चशील आध्यात्मिक साधनाका लागि मात्रै नभएर लौकिक जीवनमा पनि खुशी र समृद्धि दिने कुरा हुन्। यिनलाई अक्षुण्ण राख्न सके मानिस आनन्दित हुनसक्छ।
‘सजिलो छैन हँसाउन’ विषयहरू एकनासका हुँदैनन्। परिवर्तनशील राजनीति, समाज, चेतना र प्रविधिका कारण हाँसोका विषय फेरिइरहन्छन्। उमेर अनुसार हाँस्ने विषय र तरिका फरक हुन्छ। युवा पुस्ता गम्भीर विषयमा ठट्टा रुचाउँदैन।
हाँस्यो कि नास्यो ! आफ्नो विषयक्षेत्रमा अक्सर हल्का काम गर्ने बौद्धिक र नेताहरू अनुहारको मुद्रामा भने, गम्भीर देखिन मन पराउँछन्। हुनुपर्ने त ठीक उल्टो हो, मुद्दामा गम्भीर, मुद्रामा हँसमुख।
हाँसो : अर्को ‘नेपाली ब्रान्ड’ पर्यटन क्षेत्रमा नेपाली हाँसो एउटा शक्तिशाली ब्रान्ड नै बनिसकेको छ। तर, हामीले यसको प्रव‍र्द्धन गर्न सकेका छैनौं।
महिलालाई हाँस्न मात्र होइन, हँसाउन पनि गाह्रो ! महिलाप्रति समाज पूर्वाग्रह र पूर्वधारणाले ग्रस्त हुँदा स्ट्यान्ड-अप कमेडीमा पनि पुरुषको प्रस्तुति मात्र तौलिने गरिन्छ भने महिलाको लुक्स, उमेर, लुगा, शिक्षादीक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, बोलाइ, हिँडाइ सबै पक्षमा टिप्पणी हुन्छ।
बुझे ह्युमर, नबुझे ट्युमर राजतन्त्र उन्मूलन गरिने चर्चा चलेबाट केही क्रूद्ध ज्ञानेन्द्रले कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई आक्रामक पाराले सोधेछन्ः “के हो प्रधानमन्त्रीजी, के अब हामीले भूतपूर्व अधिराजकुमार हुनुपर्ने ?” भट्टराईले फ्याट्ट भनेछन्, “सरकार त भूतपूर्व महाराजाधिराज नै होइबक्सन्छ नि !” जवाफ सुनेर राजा वीरेन्द्र मरीमरी हाँसेछन्।
नेपालीमा हास्यचेत कति ? जुन समाज बढी अनौपचारिक हुन्छ, त्यहाँ हास्यचेत यसै मौलाउँछ। पंक्तिकारको अनुभवले के भन्छ भने, दक्षिण एसियालीको हास्यचेत युरोपेलीभन्दा त धेरै माथि छ नै, अमेरिकीभन्दा पनि कम छैन।
मीनले खिचेका ‘मीन्दास’ हाँसो तीन दशकयता देशी–विदेशी र सर्वसाधारणदेखि विशिष्ट व्यक्तिसम्मका थरीथरीका हाँसोको पोट्रेट खिच्दै आएका फोटोपत्रकार मीनरत्न वज्राचार्यसँग यी तस्वीरका रोचक कथा छन्। पछिल्लो समय उनी यिनै हँसिला तस्वीरको पुस्तक निकाल्ने चाँजोपाँजोमा लागेका छन्।
किन नियन्त्रित छ महिला हाँसो? 'महिला हाँसो' अनुचित मानेर सार्वजनिक रूपमै निर्धक्क हाँस्ने-हँसाउने अधिकार पुरुषलाई मात्रै प्रदान गरिएको समाजमा महिला हाँसेको देख्नु दुर्लभ हुनसक्छ, अस्वाभाविक होइन।
हाँसोको समाजशास्त्र : के हाँसो रमाइलो कुरा मात्र हो? कुनै पनि समाजको मूल्याङ्कन त्यो समाज कस्ता कुरामा हाँस्छ भन्ने कुराका आधारमा सबभन्दा राम्ररी गर्न सकिन्छ।